ရာသီဥတုဘေးအန္တရာယ်များ နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်း ငါးဆတိုးလာကြောင်း ကမ္ဘာ့မိုးလေဝသအဖွဲ့အစည်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြ - Xinhua News Agency
ဂျနီဗာ ၊ စက်တင်ဘာ ၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ရာသီဥတုနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်စဉ်အရေအတွက်သည် ပြီးခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် ကာလ အတွင်း ငါးဆတိုးလာကြောင်း ကမ္ဘာ့မိုးလေဝသအဖွဲ့အစည်း(WMO)က စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။သို့သော် တိုးတက်လာသည့် ကြိုတင်သတိပေးစနစ်များနှင့် ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုများကြောင့် အဆိုပါဘေးအန္တရာယ်များမှ သေဆုံးမှုအရေအတွက်သည် သုံးဆနီးပါး လျော့နည်းခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ လူဝီစီယားနားပြည်နယ် Houma မြို့၌ ဩဂုတ် ၃၀ ရက်တွင် လေမုန်တိုင်း Ida ကြောင့် ကျိုးပြတ်သွားသည့် သစ်ပင်အား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘာ့မိုးလေဝသအဖွဲ့အစည်း(WMO) က ရာသီဥတုကြောင့် သေဆုံးမှုနှုန်း နှင့် စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုများ မြေပုံညွှန်းစာအုပ်အရ ၊(၁၉၇၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ခုနှစ်အတွင်း) ဆိုးရွားသော ဥတုရာသီဖောက်ပြန်မှုနှင့် ရေကြီးမှုကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့မှုပေါင်း ၁၁,၀၀၀ ကျော် ရှိခဲ့ပြီး သေဆုံးမှု နှစ်သန်းကျော် နှင့် ဆုံးရှုံးမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၆၄ ထရီလီယံရှိခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း အာသံပြည်နယ် Dhemaji ခရိုင်၌ ဩဂုတ် ၂၈ ရက်တွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုနှင့် မြစ်ရေကြီးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ရေကြီးရေလျှံမှုများအတွင်း ကလေးငယ်အား ချီပိုး၍ သွားလာနေသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
၁၉၇၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ မိုးလေဝသ ၊ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှု နှင့် ရေကြီးမှု ဖြစ်စဉ်များသည် ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စဉ်အားလုံး၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ၊ စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုများ ထုတ်ပြန်ချက်အားလုံး၏ ၇၄ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် သေဆုံးမှုများ အားလုံး၏ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးရှိကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ယင်းသေဆုံးမှုများ၏ ၉၁ ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါကာလအတွင်း လူ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသည့် အဆိုးဝါးဆုံး ဘေးအန္တရာယ်ထိပ်ဆုံး ၁၀ ခုစာရင်းထဲတွင် မိုးခေါင်ခြင်း ၊ မုန်တိုင်းတိုက်ခြင်း ၊ ရေကြီးခြင်း နှင့် အပူချိန်လွန်ကဲခြင်းတို့ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။သို့သော် သေဆုံးမှု အရေအတွက်သည် ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် ၅၀,၀၀၀ ကျော်မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ၂၀,၀၀၀ အောက်အထိ ကျဆင်းသွားကြောင်း သိရသည်။
စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စဉ်တွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးအမြင့်ဆုံး သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ဖြစ်စဉ် ၁၀ ခုအနက် ၃ ခုမှာ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းများဖြစ်သော Harvey ၊ Maria နှင့် Irma တို့ကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ၁၉၇၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထိပ်ဆုံး ၁၀ ခုစာရင်းဝင် အဆိုပါ မုန်တိုင်း ၃ လုံးကြောင့် စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှု စုစုပေါင်းတန်ဖိုးမှာ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းထိ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မိုးလေဝသ ၊ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှု နှင့် ရေကြီးမှု ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စဉ်များသည် နှစ်စဉ်တိုးလာနေပြီး ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲခြင်းသည် ကမ္ဘာ၏ နေရာအများအပြားအပေါ် မကြာခဏ သက်ရောက်ခဲ့ပြီး ပိုမိုပြင်းထန်လာနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ကမ္ဘာ့မိုးလေဝသအဖွဲ့အစည်း(WMO) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Petteri Taalas က ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းမှာ ဥရောပ နှင့် မြောက်အမေရိကတိုက်တို့၌ မကြာသေးမီက မိမိတို့ လေ့လာသတိပြုမိသည့် အပူလှိုင်းများ ၊ မိုးခေါင်ခြင်း နှင့် တောမီးလောင်ခြင်းများ ပိုများလာခြင်းတို့ကို ဆိုလိုကြောင်း ၊ လေထုထဲတွင် ရေခိုးရေငွေ့များ ပို၍ ရှိနေပြီး ယင်းသည် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခြင်း နှင့် လူသေကြေပျက်စီးစေသည့် ရေကြီးရေလျှံမှုများ ပို၍ ဆိုးရွားလာစေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။ သမုဒ္ဒရာများ ပူနွေးလာခြင်းသည် အပြင်းထန်ဆုံး အပူပိုင်းမုန်တိုင်းများဖြစ်ပေါ်ကာ ကြိမ်နှုန်း နှင့် အကျယ်အဝန်းကို အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
“ပြင်းထန်တဲ့ ရာသီဥတုဒဏ် ခံရတာတွေ တိုးလာတာနဲ့အမျှ စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုတွေက များလာပါတယ်။ဒါပေမယ့် သိသာတဲ့ စာရင်းဇယားတွေရဲ့နောက်မှာ မျှော်လင့်ချက်သတင်းစကား တစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကို ကြိုတင်သတိပေးတဲ့စနစ်တွေ တိုးတက်လာခြင်းက သေဆုံးမှုနှုန်းကို သိသိသာသာလျော့ကျစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်းရှင်းပြောရရင် အသက်တွေကို ကယ်တင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့က အရင်ကထက် ပိုကောင်းလာပါတယ်။”ဟု WMO အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Petteri Taalas က ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့မိုးလေဝသအဖွဲ့အစည်း(WMO)အစီရင်ခံတွင် မိုးခေါင်ခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်စဉ်များနှင့် ဆက်စပ်သည့် slow-onset ဘေးအန္တရာယ်များအပေါ် ဘက်ပေါင်းစုံ နှင့် တတ်ကြွသည့် မူဝါဒများ ရေးဆွဲနေစဉ်တွင် အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံများ ၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ကျွန်းငယ် ပြည်နယ်များ နှင့် နယ်မြေများအတွက် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ယန္တရားများကို နိုင်ငံ နှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်များတွင် အားကောင်းလာစေရေးအတွက် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
GENEVA, Sept. 1 (Xinhua) — The number of weather-related disasters has increased by five times over the past 50 years, the latest report by the World Meteorological Organization (WMO) said on Wednesday.
According to the WMO Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes (1970 – 2019), there were more than 11,000 reported disasters globally, with over two million deaths and 3.64 trillion U.S. dollars in losses.
“Weather, climate and water extremes are increasing and will become more frequent and severe in many parts of the world asaresult of climate change,” says WMO Secretary-General Petteri Taalas.
“Economic losses are mounting as exposure increases. But behind the stark statistics liesamessage of hope. Improved multi-hazard early warning systems have led toasignificant reduction in mortality. Quite simply, we are better than ever before at saving lives,” Taalas said.
Photo 1 – Fire fighters battleablaze raging near Makrymalli village on Evia island, Greece, on Aug. 13, 2019. (Photo by Nick Paleologos/Xinhua)
Photo2– A tree is seen snapped off by Hurricane Ida in Houma, Louisiana, the United States, Aug. 30, 2021. (Photo by Nick Wagner/Xinhua)
Photo3– A woman carryingachild wades in flood water caused by heavy rain and overflowing of river at Dhemaji district of India’s northeastern state of Assam, on Aug. 28, 2021. (Str/Xinhua)■
တရုတ်-ဥရောပကုန်တင်ရထားက ကျိန့်ကျိုး၊ ဟနွိုင်း၊ လိဂျ် မြို့များအကြား ပထမဆုံး ချိတ်ဆက်
ကိုရီးယားစစ်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးသွားသော တရုတ်စစ်သား ၁၀၉ ဦး၏ ကြွင်းကျန် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ကိုရီးယားနိုင်ငံက ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေး